ဒူဘိုင်းရှိလုံခြုံရေးအလုပ်များ၊ G4S, World Security ယနေ့အသုံးပြုပါ
ဧပြီလ 22, 2018
ဧပြီလ 29, 2018
လုံခြုံရေးအလုပ်အကိုင်များအတွက် ဒူဘိုင်းနှင့်အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုထဲမှာ။ အလုပ်ရှာဖွေသူများအဘို့အပူဆုံးအကြောင်းအရာများတစ်ခုမှာ။ သငျသညျအလုပ်အကိုင်ရှာဖွေနေနေတယ်ဆိုရင်။ ဒူဘိုင်းအတွက်လုံခြုံရေးအလုပ်အကိုင်များသင်တို့အဘို့အကောင်းတစ်ဦး option ကိုဖြစ်နိုင်သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီသင်ကူညီပေးနေမျှော်လင့်နေပါတယ်။ ကြှနျုပျတို့မှာ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှအလုပ်အကိုင်များရှာဖွေနေသူကူညီပေးနေ။ အထူးသဖြင့်တောင်အာဖရိကမှ ဒူဘိုင်းအတွက်အိန္ဒိယအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေနေသူ နှင့်ပါကစ္စတန်သစ်ကိုပြည်တော်ပြန်အတူ။
ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီအမြဲ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေအတူလက်ပေးခြင်း။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့ အမြဲအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေသူများကိုလမ်းညွှန် ယူအေအီးအတွက်အာမခံအလုပ်အကိုင်များကိုရှာဖွေ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အထူးကုအဖွဲ့သည်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေစဉ်အတွင်းသင်ကူညီနိုင်ကြောင်းမြော်လင့်ခြင်း, ရှိခြင်းနေကြသည်။ ဒူဘိုင်းမြို့, သင်ကအရမ်းပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကုမ္ပဏီတွေအများကြီးရှိနိုင်ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့သော G4S, Hawk ရဟတ်ယာဉ်လုံခြုံရေး, အဖြစ်ကုမ္ပဏီများနှင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အရှာဖွေခြင်း ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေး နှင့်အခြားသူများဒူဘိုင်းလုံခြုံရေးကုမ္ပဏီများ။
ဒါကြောင့်စိတ်ကို၌ဤအတူ, သင်ကျိန်းသေကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြိုးစားသင့် ဒူဘိုင်းလုံခြုံရေးအလုပ်အကိုင်များကိုရှာဖွေဖို့ဘယ်လိုပေါ်ပြီးပြည့်စုံသောလမ်းညွှန်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီ၏အဓိကအရင်းအမြစ်တစ်ခုဖြစ်သည် သင်တစ်ဦးကိုယ်ရေးရာဇဝင် upload တင်သင့်တယ်ဘယ်မှာကုမ္ပဏီများမှ။ ဒူဘိုင်းနှင့်အဘူဒါဘီအတွက်ယခုအချိန်တွင်မှာချမ်းသာရှိပါတယ် ငွေရတတ်သောသူအမှုဆောင်အရာရှိ ဘို့ လုံခွုံရေး အလုပ်အကိုင်အခွင့်အ in ဒူဘိုင်း ?.
၏သင်တန်းယူအေအီးတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် ဇိမ်ခံပစ္စည်းအဘို့အကြီးထွားလာစျေးကွက်။ နှင့်ဤသီးသန့်တစ်ဦး VIP ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဖို့လာမယ့်အတူ။ ဒါ့အပြင်ကြီးထွားလာဈေးကွက်သစ်ကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအဘို့ဖြစ်၏။ ဒါ့အပြင် VIP ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးအဘို့, high-class ကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကလူ။ ထိုလူအားလုံးလုံခြုံရေးအစောင့်၏လိုအပ်ချက်၌ရှိကြ၏။
တော်တော်များများရှိပါတယ် အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရာတွင်များစွာနည်းလမ်းများ။ အထူးသဖြင့်ကျနော်တို့ကအာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအဘို့အသငျသညျကိုလမ်းပြလျှင်။ အလုပ်ခံရလတံ့သောနယူးပြည်တော်ပြန်အများအပြားအကျိုးခံစားခွင့်ကိုမျှော်လင့်နိုင်ပါတယ်။ ဥပမာတစျခုထဲမှာတည်ငြိမ်အလုပ်ဖြစ်ပါသည် ဒူဘိုင်းလေဆိပ်လုံခြုံရေး။ အခါကုမ္ပဏီသစ်တစ်ဦးဒူဘိုင်းကုမ္ပဏီ employ ပါလိမ့်မယ်။ သူတို့ကသူ့ကိုငါပေးမည် ရေရှည်အဘို့ကောင်းသောစာချုပ်.
ဒူဘိုင်းအတွက်လုံခြုံရေးအစောင့်ဖြစ်လာစေရန်။ သင်လိုအပ် သင်တန်း၏အရည်အချင်းများနှင့်အတွေ့အကြုံအချို့ကိုအချို့ရှိသည်။ သူကလုံခြုံရေးအစောင့် အမ်းမရိတ်၌အလုပ်လုပ်ကိုင်လိုသော။ သူတို့ကဒေသခံလျှင်အဘယ်သူမျှမကိစ္စ အလုပျသမားသို့မဟုတ်နိုင်ငံခြားကျွမ်းကျင်သူများ။ ထိုသူအပေါင်းတို့ကသီအိုရီနှင့်လက်တွေ့လေ့ကျင့်ရေး၏ 36 နာရီပါဝင်သောတစ်ပါတ်ကြာသင်တန်းသွားနှင့်ဖြတ်သန်းရပေမည်။ ဒူဘိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့အကယ်ဒမီလက်မှတ်၏3ခြေလှမ်းများကိုစီမံခန့်ခွဲ။ ဒေသခံအခွင့်အာဏာထို့နောက်သုံးစာမေးပွဲများအတွက်စမ်းသပ်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါခံတွင်းကိုသင်မေးခွန်းများကိုဖြေဆိုရန်လိုအပ်သည့်အခါ။ ထိုအခါသင်သည်ရေးထားပြီပါလိမ့်မယ် စမ်းသပ်မှုနှင့်လက်တွေ့အသိပညာအကဲဖြတ်။ အပေါ်အကြံပေးချက်များအပေါ်တစ်ဦးကြည့်ဖူး စမ်းသပ်သွားပုံကို ဒီမှာ။ ထိုအခါလျှင် အောင်မြင်သောကိုယ်စားလှယ်လောင်း လူအပေါင်းတို့သည်3စစ်ဆေးမှုများကိုပါအောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်။ ဗြိတိသျှအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာရေးအဖွဲ့အစည်းက City နှင့် Guilds သည်ကျိန်းသေသင်တစ်ဦးကလုံခြုံရေးအစောင့်ဖြစ်လာဖို့အသိအမှတ်ပြုတစ်ဦးလက်မှတ်ပေးအပ်တဲ့လက်မှတ်ကိုငါပေးမည်။
Thes3အစီအစဉ်များကိုပြစ်မှုဆိုင်ရာစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအပေါ်အတန်းများပါဝင်သည်။ လုံခြုံရေးရည်ရွယ်ချက်ပစ္စည်းကိရိယာများကိုအသုံးနည်း။ မီးသတ်သမားများနှင့်မည်သို့မည်ပုံမော်တော်ယာဉ်များနှင့်ဝုဏ်အတွင်းရှာဖွေစီမံခန့်ခွဲဖို့ကိုဘယ်လို။ လုံခြုံရေးအများအတွက်အပြုသဘောဘက်တွင် ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အ။ သငျသညျသင်ယူပါလိမ့်မည်နေစဉ်သင်ခန်းစာများကိုရာခိုင်နှုန်း 50 ထက်ပိုမိုလက်တွေ့ကျတဲ့ဖြစ်ကြသည်။ ဒါကြောင့်မသာသင်တစ်ဦးကိုယ်ရံတော်ဖြစ်သူသိပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့ သငျသညျနည်းမှန်လမ်းမှန်ထဲမှာလုပ်ဖို့ဘယ်လိုသင်ယူရလိမ့်မယ်။
ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများကိုလည်းလေ့လာသင်ယူသောအရေးအပါဆုံးအရာတစျခု။ ယေဘုယျအားဖြင့်စကားပြောနှင့်အတူလည်ဖို့ဘယ်လိုဖြစ်ပါသည် ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုပဋိပက္ခအလုပ်အကိုင်များ။ လမ်း၏အဆုံးမှာစီမံခန့်ခွဲမှုမသာသိသင့်သောကြောင့်နှင့်မည်သို့ဂတိတော်ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန်။ သငျသညျသင်ယူသင့်ပါတယ် ကိုယ်ကိုကိုယ်နှင့်အခြားသူများကိုစီမံခန့်ခွဲဖို့ဘယ်လို အရေးပေါ်အတွက်။ အဆိုပါအမှုအရာကိုယ်စားလှယ်လောင်းကိုပထမဦးဆုံးတစ်ဦးရာဇဝတ်မှုမြင်ကွင်းတစ်ခုကိုထိန်းသိမ်းဖို့ဘယ်လိုဖြစ်တယ်သင်ယူကြသည်။ အပြုသဘောဘက်တွင်, သောရဲတပ်ဖွဲ့ဌာနအနေဖြင့်သင်ခန်းစာဖြစ်လိမ့်မည်။ တစ်ခုတည်ထောင်ခြင်းသို့မဟုတ်မော်တော်ယာဉ်ကိုရှာဖွေဖို့ဘယ်လိုမှအဖြစ်သတင်းအချက်အလက်သကဲ့သို့ရှည်လျား။ ဆုံးမဩဝါဒ ပေး. သူသည်အဓိကပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး၏တစ်ဦးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစင်တာတွင်ဖြစ်ပါသည် လုံခြုံရေးနှင့်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး ဒူဘိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့အကယ်ဒမီမှာ။
မြေတပြင်လုံးသင်တန်းများနှင့်အတန်းအကြီးတန်းရဲအရာရှိများကပေးအပ်ထားတယ်။ ဒါကြောင့်သင်ကသင့်လျော်စွာပြုမူရပေမည်။ ထိုမှတပါး, သင်ကဘယ်လိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရမယ်ဆိုတာကိုသိရှိရမည် ပင်လယ်ကွေ့ကုမ္ပဏီ။ အချို့ကုမ္ပဏီတွေကဥပမာ, ထိုကဲ့သို့သောမြို့ပြကာကွယ်ရေးကဲ့သို့သောအခြားအစိုးရနှင့်စီးပွားဖြစ် related ရင်းမြစ်များမှသင်တန်းပို့ချလာပြီ။ အပြုသဘောဘက်တွင်, ထိုသူအပေါင်းတို့သည်အကယ်ဒမီမှာနေရာတစ်နေရာယူပါလိမ့်မယ်။ ဒူဘိုင်းအတွက်လုံခြုံရေးအလုပ်အကိုင်များအဘို့, အတော်ကြာကုမ္ပဏီများသည်၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်လေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းများဖွင့် setting နေကြသည်။ အဆိုပါအနုတ်လက္ခဏာဘက်တွင်စာမေးပွဲအတွက်အကယ်ဒမီမှာယူရမည်ဖြစ်သည်။
မြေတပြင်လုံးလေ့ကျင့်ရေးအစီအစဉ်တွင် 2005 အတွက်ဒူဘိုင်းနှင့်အဘူဒါဘီမှာစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်အဓိက စီးပွားရေးလုပ်ငန်း 2008 အတွက် running စတင်ခဲ့သည်။ ဒီတော့ဝေး, အအကယ်ဒမီ 57,000 လုံခြုံရေးပုဂ္ဂိုလ်များအကြောင်းကိုလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခဲ့သည်။ အဆိုပါအစီအစဉ်တွင်လူအများ၏အများစုကိုမလွန်ပါလိမ့်မယ်ဒီလမ်းအတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ဒါကြောင့် သင်သည်ထိုအကြောင်းကိုသိပ်စိတ်ပူစရာမလိုအပ်ပါဘူး။ အဆိုပါဖြတ်သန်းအချိုးထက်ပိုမို 80% ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကတကယ်မူတည်,အလုပ်အကိုင်အခြို့ AED1,000 8,000 အထိတစ်လများမှာ။ ပြီးတော့တစ်ဦးစိတ်ကိုအတူသငျသညျမှာကြည့်သင့်ပါတယ် လုံခြုံရေးအစောင့်အလုပ်အကိုင်များပြန်လည်သုံးသပ်ချက်များ။ အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုမှာတော့အားလုံးအလုပ်ရှင်များသငျနှငျ့အတူတွေဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်။ အဘယ်အရာကိုအဆောက်အဦသင်လက်ရှိစီမံခန့်ခွဲနေကြပါတယ် ?. ပိုပြီးထွက်ရှာနိုင်ရန်အတွက်, သင်ဒူဘိုင်းနှင့်အဘူဒါဘီကနေအခြားအကျွမ်းကျင်သူများတောင်းဆိုနိုင်ပါသည်။ ထွက်ရှာတွေ့ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါသည် လုပ်ခအကြောင်းတခြားသူတွေကိုမေး။ ကွောငျ့သငျသညျကိုမှန်ကန်ထွက်သည်ကိုတွေ့လိမ့်မည်သည်အထိသင်အမှန်တကယ်ကြောင့်မသိရပါဘူး။
အချိန်ယူပြီးဒူဘိုင်းလုံခြုံရေးအလုပ်အကိုင်များရှာဖွေခြင်း။ စံ အလုပ်ကအချိန်ယူပြီးဖြစ်ပါတယ်ရှာဖွေနေ။ သငျသညျကွိုးစားပါလိမ့်မယ်ဘယ်လိုခက်ခဲနေပါစေ။ အများဆုံးကိစ္စများတွင်ပါက 6months န်းကျင်ကိုယူပါလိမ့်မယ်။ သင်အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအတွက်သုံးဖြုန်းလိမ့်မယ်အချိန်။ ဒါဟာအစဉ်အမြဲသင့်ရဲ့မျက်နှာသာအတွက်ကစား, အထူးသဖြင့်ပြည်ပမှာပြည်တော်ပြန်များအတွက်.
လုံခြုံရေးအစောင့်တပ်ဖွဲ့အဖြစ်, သင်ကအခြေခံလစာမျှော်လင့်ထားနိုင်ပါတယ်။ သင်တို့၏ကောင်းသောအတွေ့အကြုံနှင့်အတူအခြားတစ်ဖက်တွင်, သင်တစ်ဦးကယ့်ကိုအကောင်းလစာစီမံနိုင်သည်။ ပုဂ္ဂလိက VIP လုံခြုံရေးအစောင့်အဖြစ်, သငျသညျတစျနေ့ 550 AED မှတက် 1,500 ကျော်စီမံခန့်ခွဲနိုင်ပါတယ်။ အပြုသဘောဘက်တွင်, သငျသညျမလိုအပ်ပါဘူး MBA ဘွဲ့ရအရည်အချင်းများစီမံခန့်ခွဲရန်.
အတော်ကြာကုမ္ပဏီများသည်ယခုဒူဘိုင်းများအတွက်စုဆောင်းနေကြသည်။ တကယ်တော့တစ်ဦးကိစ္စအဖြစ်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကုမ္ပဏီဒူဘိုင်းနှင့်အဘူဒါဘီအတွက်ရရှိနိုင်အလုပ်အကိုင်များရှိပါတယ်။ အထူးသဖြင့်တံခါးကိုကြီးကြပ်ရေးမှူးများနှင့် VIP လုံခြုံရေးလက်ထောက်ဘို့။ ယေဘုယျအားဖြင့်သင်အဘူဒါဘီနဲ့ဒူဘိုင်းအတွက်လို့ရပါတယ်စကားပြော ညာဖက်ကလူမှလက်ျာဘက်အခွင့်အလမ်းများပေးခြင်းကြသူအများအပြားကုမ္ပဏီများသည်ကိုရှာဖွေရန်။ အဆိုပါ အောက်ပါနှစ်ပေါင်းအရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာလုံခြုံရေးစျေးကွက်အတွက်ကြီးမားသောဖွံ့ဖြိုးမှုကိုပြသပါ။
အပြုသဘောဘက်တွင်များစွာသော အလုပ်အကိုင်နေရာလွတ်တစ်ခုပြပွဲစတင်နေကြသည်။ သူတို့အခွအေနမြေိုး, စော်ဘွားကုန်စည်ပြပွဲ 2020 အလုပ်အကိုင်များကိုလုံခြုံရေးအစောင့်များ၏ငှားရမ်းနှင့်အတူတိုးတက်။ ဒီရက်ဟာ GCC ဒေသနောက်ဆုံးတော့ကျွမ်းကျင်သူများများအတွက်အလွန်ကောင်းသောအလုပ်အကိုင်များကိုစီမံခန့်ခွဲဖို့စတင်တာဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့်အတူ အဘူဒါဘီနဲ့ဒူဘိုင်းကုမ္ပဏီများ။ ထို့အပြင် 2020 ရွေ့လျားနေသည်ကုန်စည်ပြပွဲနှင့်အသစ်ကုမ္ပဏီများသည်နိုင်ငံခြားသားများအတွက်အထူးအစီအစဉ်များကိုစတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, သငျသညျမြားကိုလညျးကုမ္ပဏီများမှငှားရမ်းကိုကြည့်သင့်ပါတယ်။ ဒူဘိုင်းအတွက် Careerjet က်ဘ်ဆိုက် နှင့် Monster ပင်လယ်ကွေ့အလုပ်အကိုင်များက်ဘ်ဆိုက်။ သူတို့ကသင်၏ CV နှင့်အတူလျှောက်ထားရန်ကယ့်ကိုထိုက်တန်ဖြစ်ကြသည်။
ဒူဘိုင်းအတွက် bouncers အလုပ်
တစ်ဦး bouncers အဖြစ်ဒူဘိုင်းအတွက်လုံခြုံရေးအလုပ်အကိုင်များလူကြိုက်အများဆုံးဖြစ်ကြသည်။ ဒူဘိုင်းမြို့ ကုမ္ပဏီဒူဘိုင်းလုံခြုံရေးအလုပ်အကိုင်အပြည့်အဝစာရင်းပေးသညျ။ ဒါကြောင့်စိတ်ကို၌ဤအတူကျွန်တော်တို့ရဲ့အသင်းကိုစီမံခန့်ခွဲတာဖြစ်ပါတယ် အလုပ်ရှာဖို့ဘယ်လိုအကြောင်းကိုအသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များ ဒူဘိုင်းအတွက်လုံခြုံရေးလူတစ်ဦးအဖြစ်။ တစ်ဦးကိုဘယ်လိုလုံခြုံရေးကဏ္ဍတွင်အလုပ်အကိုင်ကိုရှာဖွေကိုယ့်ကိုယ်ကိုကြည့်ရှုရှိသည်။ ဒူဘိုင်းလုံခြုံရေးကိုယ်ရံတော်သောကြောင့်, အလုပ်နှင့်လစာအာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအတွက်အလွန်ကောင်းသောများမှာ.
ယူအေအီးအတွက် bouncers အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းကောင်းစွာအများဆုံးကိစ္စများတွင်ပေးဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။ သင်တို့မူကားကောင်းတစ်ဦးအတွေ့အကြုံရှိသည်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ ထို့အပြင်အားကစားရုံမှအကောင်းနှင့်ရထားရှာဖွေနေ။ ယင်းအတွက်နိုက်ကလပ်အချို့သောကြောင့် အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအချို့အကူအညီနဲ့ရှာဖွေနေ။ အထူးသဖြင့်ပြင်ပလုံခြုံရေးကုမ္ပဏီများမှမှ။ ဒီအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနှင့်အတူအဓိကအရာတစ်ခုမှာကုမ္ပဏီရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်နေပါသည်။ လုံခြုံပြီးလုံခြုံပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းခြင်းများကဒေသခံဝန်ထမ်းကူညီပေးခြင်း ဖြစ်ခြင်းအချိန်များအတွက်.
တစ်ဦး bouncers အဖြစ်, သင်တစ်ဦးကြေးစားလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ နေသမျှကာလပတ်လုံးသင်ကာကွယ်ရေးတရားသွယ်ဝိုက်ပြုမူလိမ့်မယ်အဖြစ်။ သင်ဘဝကိုစောင့်ရှောက်ရန်အလို့ငှာနှင့်သင့်ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုကိုထိန်းသိမ်းရန်မည်, သေချာအောင်ရန်လိုအပ်ပါတယ် အားလုံးတစ်ကြိမ်မှာလုံခြုံ။ သတိမရှိသောဖောက်သည်တိကျလုပ်ရပ်တွေကိုယူပြီးအဆိုပါ bouncers ။ နယူးအစီရင်ခံစာများ ထောက်ပံ့ရပါမည် အသေးစိတ်အတွက်ကလပ်အသင်းအတွက်ဖြစ်ရပ်များအတွက်မဆိုသံသယဖြစ်ရပ်များဖြစ်သည်။ ထိုမှတပါး, ကင်းလှည့်ဧရိယာကိုကျပန်းသို့မဟုတ်မှန်မှန်တည်ဆောက်ခြင်းနှင့်ဥပစာ။
ကလပ်မီ, ကပိတ်လိုက်ပါလိမ့်မည်။ ယင်းကို bounce အများစုဟာ ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အ တံခါးဝများနှင့်မော်တော်ယာဉ်တံခါးတို့ကိုတည်ဆောက်ခြင်းမှမော်နီတာနှင့်ထိန်းချုပ်မှု access ကိုပါဝငျသညျ။ ညဉ့်အချိန်တွင်, အလုပ်နည်းနည်းလုံခြုံဖြစ်နိုင်သည်။ သို့သော်အခြားလုံခြုံရေးအစောင့်စောင့်ကြည့်ဦးမည် CCTV အပေါ်နှိုးဆော်သံစနစ်များကို။ ထိုအခါကင်မရာများနှင့် operating system ကိုအများစုသင်ကြည့်ရှုပါလိမ့်မယ် အရေးပေါ်အခြေအနေများဖော်ထုတ်မယ် 24h တစ်နေ့.
အဆိုပါ G4S လုံခြုံရေးကမ်ဘာပျေါတှငျကမ္ဘာ့ဦးဆောင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ မှတစ်ခုဖြစ်သော ပြည်တော်ပြန်များအတွက်အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းချက်။ ထို့ပြင်၎င်းတို့သည်လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးအလုပ်ရှင်၏တဝတည်းဖြစ်ကြ၏။ အဆိုပါ G4S အလုပ်အတွက်အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာအကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။ အဆိုပါလည်းအများဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည် အဆင့် Forbes မဂ္ဂဇင်းအပေါ် G4S.
အဆိုပါ G4S ကုမ္ပဏီအကျိုးခံစားခွင့်တွေအများကြီးပေးထားပါတယ်။ မှ အခြေခံလစာနှင့်ဆုကြေးငွေ သူတို့ရဲ့န်ထမ်းမှငွေပေးချေ။ သငျသညျ, စိတ်လှုပ်ရှားစရာကြိုးများနှင့်ရေရှည်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအခွင့်အလမ်းများကိုတစ်ဦးကြီးမားသောအကွာအဝေးရှာနေနေတယ်ဆိုရင်။ အဆိုပါ G4S ကုမ္ပဏီသင်တို့အဘို့ဖြစ်၏။ တစ်ခုမှာ ယူအေအီးအတွက်ရေရှည်အလုပ်အတွက်အကောင်းဆုံးသောနေရာများ။ ဒါဟာသင်အမှန်တကယ်လုံခြုံရေးအတွက်ခြားနားချက်ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်ရှိရာကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည် ဒူဘိုင်းအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း.
ဒူဘိုင်းဈေးကွက်ထဲမှာလုံခြုံရေးအလုပ်အကိုင်များအတွင်း။ အဆိုပါ G4S အထူးသဖြင့်သင်တို့အဘို့အကောင်းတစ်ဦးနေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည် သငျသညျနိုင်ငံခြားအလုပ်အကိုင်နေရာလွတ်ကိုရှာဖွေလျှင်။ အဆိုပါ G4S အားဖြင့်သင်တို့ကိုရိုးရှင်းစွာ၏အမျိုးမျိုးနှင့်မတူကွဲပြားမှုကိုရှာဖွေမည်မဟုတ် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း အခြားကုမ္ပဏီများနှင့်အတူဘယ်နေရာမှာမဆို။
ပထမလုံခြုံရေး Group မှ
အခြား စိတ်ဝင်စားကုမ္ပဏီ ပထမဦးစွာလုံခြုံရေး Group မှဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကကုမ္ပဏီပြင်းပြင်းထန်ထန် ကြောင်းအရှေ့အလယ်ပိုင်းအောင်မြင်မှုအသိအမှတ်ပြုရန်။ ပထမဦးဆုံးလုံခြုံရေးအဖွဲ့ကိုအကြီးအကျယ်လူသစ်ငှားရမ်းပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ကုမ္ပဏီတပြင်လုံးကိုစနစ်ကယုံနှင့်ဖွံ့ဖြိုးဆဲဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါကျွမ်းကျင်သူများ၏အချို့နှင့်အတူအလုပ်လုပ်နေကြ ဒီကုမ္ပဏီနှင့်ဒူဘိုင်းအတွက်လုံခြုံရေးပြောင်းလဲနေသောပြောင်းလဲနေတဲ့။ ဒါကြောင့်သင်ကဒူဘိုင်းလုံခြုံရေးအလုပ်အကိုင်များကိုရှာဖွေနေပါသည်လျှင်။ ခြွင်းချက်ကလူကိုစီမံခန့်ခွဲကိုပထမဦးဆုံးလုံခြုံရေးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့။ ထိုအခါသူတို့ကိုတစ်ဦးဖြစ်လာ ပင်သစ်တစ်ခုကျွမ်းကျင်သူများအဖြစ်ကတကယ့်ရကျိုးနပ်သည်.
ပထမဦးဆုံးလုံခြုံရေးအဖွဲ့ကိုအရေးအပါဆုံးမစ်ရှင်ရှိပါတယ်။ ကြောင့်အရှေ့အလယ်ပိုင်းကိုကူညီပါ ကုမ္ပဏီအလုပ်ပတ်ဝန်းကျင်ပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကုမ္ပဏီနှင့်အတူသင်လုပ်နိုင်သည် တစ်ဦးချင်းစီအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမျှော်မှန်းချက်စီမံခန့်ခွဲ။ အဆိုပါန်ထမ်းအများစုဟာသူတို့ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုအခြေခံမြှင့်တင်ရန်နှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတိုးတက်မှုနှုန်းအားပေး။ ပထမဦးဆုံးလုံခြုံရေး အုပ်စုတစ်စုအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဒူဘိုင်းအတွက်အလွန်အမင်းဖြစ်နိုင်။ ဒါ့အပြင်ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များယူအေအီးအတွက်အများအပြားစျေးကွက်အတွင်းထောက်ခံနေကြသည်။
ဒါကကုမ္ပဏီကောင်းစွာအလုပ်လုပ် ယူအေအီးခရီးသွားဧည့်သေချာစေရန်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်။ ပထမဦးဆုံးလုံခြုံရေးအဖွဲ့များကိုသင်တန်းနှင့်နောက်ဆုံးပေါ်အဆောက်အဦအတွင်းကမ္ဘာ့အဆင့်မီကုမ္ပဏီဖြစ်လာသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ, ထိုလူအပေါင်းတို့သည်သစ်ကိုလူတို့အားလက်လှမ်းများမှာ ထဲမှာ ကုမ္ပဏီနှင့်အသစ်လုပ်သားများ။ အဆိုပါလူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းအဖွဲ့အစည်းအနှံ့အများအပြားကန်ထရိုက်စီမံခန့်ခွဲခြင်း။ ယူအေအီးအတွက်အာမခံစာချုပ်များကိုစီမံခန့်ခွဲ၏ရည်ရွယ်ချက်, သူတို့ရဲ့န်ထမ်းမှအောင်ကုမ္ပဏီအတွက် ၎င်းတို့၏အလုပ်အကိုင်များ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများအတွက်နည်းလမ်းသစ်။ အဆုံးတိုင်အောင်, ထိုကုမ္ပဏီကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီယဉ်ကျေးမှု၏အလွန်ဂုဏ်ယူသည်။
ရန်သင့် CV ကိုတစ်ဦးမိတ္တူ enclosing ကျွန်တော်တို့ရဲ့ HR ဌာနအီးမေးလ်ပို့ ကျေးဇူးပြု. info@firstsg.com.
Hawk ရဟတ်ယာဉ်လုံခြုံရေးန်ဆောင်မှုများမှာ ယူအေအီး၌အခြားသောငှားရမ်းကုမ္ပဏီ။ သူတို့အခွအေနမြေိုး, အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများကိုအသစ်ကပြည်တော်ပြန်များအတွက်ဖွင့်။ ဒီကုမ္ပဏီ၏တည်နေရာအာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု၌တည်ရှိ၏။ အလွန်ကောင်းသောကုမ္ပဏီ တစ်ဦးကျွမ်းကျင်သူများအဖြစ်အဘို့အလုပ်ကိုင်ဖို့. ကုမ္ပဏီဟာအလွန်ထူးခြားတဲ့နှင့်ကွဲပြားခြားနားချဉ်းကပ်မှုရှိပါတယ်လို့ပဲ။ အထူးသဖြင့် ဒူဘိုင်းအတွက်အသစ်တခုဝန်ထမ်းများအတွက်, Sharjah နှင့်အဘူဒါဘီ။
အဆိုပါ Hawk လုံခြုံရေးကုမ္ပဏီကွဲပြားခြားနားသော site ကိုရှိပါတယ် ယူအေအီးအတွင်းနေရာများ. အကျိုးသက်ရောက်မှုခုနှစ်တွင်န်ထမ်းတွေအများကြီး အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုတစ်လျှောက်လုံးဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်တစ်ခုရှာတွေ့. သငျသညျလျှင်ယေဘုယျအားဖြင့်စကားပြော အလုပ်ခံရဖို့စိတ်ဝင်စား လုံခြုံရေးစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ထိပ်တန်းအလုပ်ရှင်များ၏တဦးတည်းအားဖြင့်။ အဆိုပါ Hawk ရဟတ်ယာဉ်လုံခြုံရေးကုမ္ပဏီလုံခြုံရေးအထူးကုအဖြစ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဖွံ့ဖြိုးဆဲခြင်းနှင့်တကွသင်ကူညီပေးနိုင်ပါလိမ့်မည်။
သငျသညျရနိုင်အကျိုးကျေးဇူးများကိုအများကြီးရှိပါတယ် Hawk ရဟတ်ယာဉ်လုံခြုံရေးကုမ္ပဏီထံမှ။ သင်လေ့ကျင့်ရေး join ကတည်းကနှင့် သင့်ကိုယ်ပိုင်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဖွံ့ဖြိုးဆဲစတင်ရန် ဒီကုမ္ပဏီတစ်ခုကအတူ။ ကျိန်းသေ, သင်လုပ်ဆောင်ချက်ကောင်းတစ်ဦးအစီအစဉ်နှင့်အတူကိုယ့်ကိုယ်ကိုရှာဖွေပါလိမ့်မယ်။ သင့်အနေဖြင့်ညီညွတ်သောအာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုထဲမှာ Hawk ရဟတ်ယာဉ်လုံခြုံရေးန်ဆောင်မှုများလာနှင့်ပူးပေါင်းသင့်တယ်။ ဒါကြောင့်ဒီကုမ္ပဏီ ဒူဘိုင်းမှရွေ့လျားများအတွက်အလွန်ကောင်းသော.
သင့်ရဲ့ကိုယ်ရေးရာဇဝင်မှ Send Email: hr@hawksecurityservice.com
အဆိုပါ Guardforce လုံခြုံရေးန်ဆောင်မှုများလုံခြုံရေးဖြေရှင်းချက်တစ်ခုကျယ်ပြန့်သည်။ သင်သည်သင်၏လုံခြုံရေးထားရှိနိုင်ပါသည် ဒူဘိုင်းသို့မဟုတ်အဘူဒါဘီအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း။ ယေဘုယျအားဖြင့်သူကစောင့်တပ်တပ်ဖွဲ့လုံခြုံရေးဝန်ဆောင်မှု, နေပါတယ်စကားပြော ကာကွယ်စနစ်၏ဒူဘိုင်းရဲများဦးစီးဌာန (DPS) ကအတည်ပြုခဲ့သည်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီရည်ရွယ် အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုထဲမှာအကြီးဆုံးဖြစ်လာရန်။ စောင့်တပ်တပ်ဖွဲ့လုံခြုံရေးနှင့်အတူ သင်တစ်ဦးဝန်ထမ်းများသို့မဟုတ်ကြီးကြပ်ရေးမှူးအဖြစ်အလုပ်ရှိနိုင်ပါသည်.
အဆိုပါအနုတ်လက္ခဏာဘက်တွင်, သင်သည်ဤကုမ္ပဏီနှင့်အတူအစည်းအဝေးတစ်ခုသွားနေစဉ်။ သင်လုပ်ဖို့ ... လိုပါတယ် တစ်ဦးဝန်ထမ်းဖြစ်လာမှနိမ့်ဆုံးလိုအပ်ချက်ဖြည့်ဆည်း။ အဆိုပါ Guard Force လုံခြုံရေးဝန်ဆောင်မှုအာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုကနေနိုင်ငံတကာနှင့်ဒေသခံဖောက်သည်တွေအများကြီးရှိပါတယ်။ သင်တစ်ဦးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအခွင့်အလမ်းရှိနိုင်ပါသည် တစ်ဦးအတွင်း စက်မှုလုပ်ငန်းများကျယ်ပြန့်အမျိုးမျိုး။ ရေရှည်မှာ, သင်ပညာရေးလုံခြုံရေးနှင့်အတူလက်လီ, ဘဏ္ဍာရေးသို့မဟုတ်ပင်အလုပ်အကိုင်အနေဖြင့်ရွေးချယ်နိုင်သည်။ ပစ္စုပ္ပန်အချိန်အထိ, ကုမ္ပဏီငှားရမ်းဖြစ်ပါတယ် ဧညျ့ကုမ္ပဏီများအတွက်။ ရှင်းမှအခြားစီးပွားဖြစ်ကုမ္ပဏီများနှင့်စက်မှုကဏ္ဍများစောင့်တပ်တပ်ဖွဲ့လုံခြုံရေးဝန်ဆောင်မှုနှင့်အတူပူးတွဲ operated ပါပြီ။
သူတို့ကအစဒူဘိုင်းအတွက် CCTV အလုပ်အကိုင်များများအတွက်ငှားရမ်းနေကြ
ဒီနေရာတွင်မှတ်ပုံတင်ရန်သင့်ပါတယ်တဲ့ link ကိုဖြစ်ပါတယ် http://guardforce.ae/career/
ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီယခုပေးအပ် ဒူဘိုင်းတွင်ဂျော့ဘ်များအတွက်ကောင်းသောလမ်းညွှန်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဘို့အသီးအသီးဘာသာစကားကိုသတင်းအချက်အလက်ကိုထည့်သွင်းဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ် ဒူဘိုင်းကျွမ်းကျင်သူများ။ ဒါကြောင့်စိတ်ကို၌ဤအတူသင်အခုလမ်းညွှန်များရနိုငျသညျ, အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုထဲမှာအကြံပေးချက်များနှင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့် သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဘာသာစကားနှင့်အတူ။